July 17, 2021 - ApannPyay Media
July 17, 2021 by ApannPyay Media
ဆန်ဆေးရည်ရဲ့ အကျိုးအာနိသင်တွေ ဒီတစ်ခါ ဆန်ဆေးတဲ့ရည်တွေ မသွန်သင်ဘဲ ဒီလိုနေရာတွေမှာ အကျိုးရှိရှိ အသုံးပြုလို့ရတယ်နော် #photocrd ဆန္ေဆးရည္ရဲ့ အက်ိဳးအာနိသင္ေတြ ဒီတစ္ခါ ဆန္ေဆးတဲ့ရည္ေတြ မသြန္သင္ဘဲ ဒီလိုေနရာေတြမွာ အက်ိဳးရွိရွိ အသုံးျပဳလို႔ရတယ္ေနာ္ #photocrd
ကြက်ဥမှာ ဆိုးကျိုးတွေရှိတာ သိပြီးပြီလား ?
ကြက်ဥမှာ ဆိုးကျိုးတွေရှိတာ သိပြီးပြီလား ? ကိုဗစ် နဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး ကြက်ဥဝယ်ယူမှု အားကောင်းလာပါတယ်။ ကြက်ဥများများစားမယ်ဆိုပြီး အိမ်မှာ ဒါဇင်နဲ့ချီ သိုလှောင်တဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အခွင့်အရေးသမား ဈေးသည်တွေကလည်း ကြက်ဥကို ဈေးတင်တယ်။ ကြက်ဥတစ်လုံးဈေးဟာ ၃၀၀၊ ၃၅၀ အထိ ဈေးကြီးလာပါတယ်။ဒါကို အမြင်ကပ်လို့ ဒီ post ကို တင်လိုက်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ကြက်ဥဟာ စားတိုင်းမကောင်းပါဘူး။ အစားအစာတိုင်းဟာ တန်ရင်ဆေး၊ လွန်ရင်ဘေး ဖြစ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ဟာ တစ်ရက်ကို ကြက်ဥ ၂ လုံးထက် ပိုမစားသင့်ပါဘူး။ ပိုပြီးတိကျရရင် တစ်ပတ်ကို ကြက်ဥ ၅ လုံးထက်တောင် ပိုမစားသင့်ပါဘူး။ ကြက်ဥ အစားများတဲ့အခါ 1. နှလုံးရောဂါ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ (၃၇% သေချာ) 2. … Read more
မျက်နှာပေါ်က အမာရွတ်အမည်းစက်တွေပျောက်ကင်းစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်းများ
မျက်နှာပေါ်က အမာရွတ်အမည်းစက်တွေပျောက်ကင်းစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်းများ မျက်နှာပေါ်မှာ အမည်း စက်တွေ အနည်း နဲ့ အများ ရှိနေတာက သင့်ကို မှန်ကြည့်တိုင်း စိတ်အနှောင့် အယှက်ပေးပါတယ် ပြသနာတိုင်းအတွက် အဖြေဆိုတာ ရှိပါတယ် အခုမှာဆိုရင်လည်း နေရောင်ကြောင့် ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲကြောင့် ဖြစ်တဲ့ အမည်းစက်တွေကို သက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်မယ့် အဖြေဆိုတာ ရှိပါတယ် ၁= သံပရိုရည် ပါဝင်ပစ္စည်းများ သံပရိုသီး တစ်ဝက် ပျားရည် စားပွဲတင်ဇွန်း -၁ ဇွန်း သံပ႐ိုသီးကေန အရည္ကို ညႇစ္ထုတ္ေပးၿပီး ပ်ားရည္ထည့္ေရာေပးပါ မ်က္ႏွာေပၚ လိမ္းေပးၿပီး ၁၀-၁၅ မိနစ္ ႏွပ္ထားေပးပါ ေရေႏြးေႏြး နဲ႔ မ်က္ႏွာသစ္ေပးပါ ၂= ကြက်သွန်ဖြူ ပါဝင်ပစ္စည်းများ ကြက်သွန်နီ အနည်းငယ် ကြက်သွန်ဖြူ -၁ မြွာ … Read more
OXYGEN လုံးဝမရခဲ့ရင်ဘာမှစိတ်ဓာက်မကျပါနဲ့ အသိဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုပြောပြလို့ခုဆိုရင်လူဦးရေ(၉)ယောက်ထိသက်သာသွားပါပြီ ( မယုံရင်လက်တွေ့ပြုလုပ်ကြည့်ပါ ) ဘာမှစိတ်ဓာက်မကျပါနဲ့OXYGEN လုံးဝမရခဲ့ရင်ကွမ်းရွက်ကို လက်တစ်ဆုတ်စာဖြစ်ပြီးရူပေးပါ (အောက်ဆီဂျင်)60/လောက်ကျ နေသာတောင်ပြန်ကောင်းလာတာတွေ့နေရပါပြီ… ရူပြီးနောက်(ချွဲသလိပ်၊နှပ် ၊တွေ)ထွက်လာပြီး ၊လေဝင်၊လေထွက်ကောင်းလာပါလိမ့်မယ်… အသိဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုပြောပြလို့ခုဆိုရင်လူဦးရေ(၉)ယောက်ထိသက်သာသွားပါပြီ… မှတ်ချက် ဖျားချင်နေပြီ / ဖျားနေပြီ/ခေါင်းကိုက်နေရင်/အနံ့မရလျှင် ရေနွေးအိုးထဲကို ကွမ်းရွက် ( ၅ )ရွက် ငရုပ်ကောင်းစေ့ (၅ )စေ့ ဂျင်းပါးပါးလှီး (၅ )ပြား လ္ဘက်ခြောက်ခပ်သလိုသောက်ပေးပါ(ရူပေးပါ) အထက်ပါ (၉)ဦးထဲမှအနံ့ပျောက်သူ(၃)ဦးလဲ ကွမ်းရွက်ကိုလက်တဆုတ်စာချေပြီရူပေးလို့ သက်သာပျောက်ကင်းသွားပါတယ်… အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ… မေတ္တာဖြင့် #အရှင်သံဝရ(မြို့မ) OXYGEN လုံးဝမရခဲ့ရင္ဘာမွစိတ္ဓာက္မက်ပါနဲ႔ အသိဓမၼမိတ္ေဆြတို႔ကိုေျပာျပလို႔ခုဆိုရင္လူဦးေရ(၉)ေယာက္ထိသက္သာသြားပါၿပီ ( မယုံရင္လက္ေတြ႕ျပဳလုပ္ၾကည့္ပါ ) ဘာမွစိတ္ဓာက္မက်ပါနဲ႔OXYGEN လုံးဝမရခဲ့ရင္ကြမ္းရြက္ကို လက္တစ္ဆုတ္စာျဖစ္ၿပီး႐ူေပးပါ (ေအာက္ဆီဂ်င္)60/ေလာက္က် ေနသာေတာင္ျပန္ေကာင္းလာတာေတြ႕ေနရပါၿပီ… ႐ူၿပီးေနာက္(ခၽြဲသလိပ္၊ႏွပ္ ၊ေတြ)ထြက္လာၿပီး ၊ေလဝင္၊ေလထြက္ေကာင္းလာပါလိမ့္မယ္… အသိဓမၼမိတ္ေဆြတို႔ကိုေျပာျပလို႔ခုဆိုရင္လူဦးေရ(၉)ေယာက္ထိသက္သာသြားပါၿပီ… မွတ္ခ်က္ ဖ်ားခ်င္ေနၿပီ … Read more
ကျန်းမာရေးအတွက် စားသုံးဖို့ မသင့်တော်တဲ့ ငါးအမျိုးအစား ၅ မျိုး
ကျန်းမာရေးအတွက် စားသုံးဖို့ မသင့်တော်တဲ့ ငါးအမျိုးအစား ၅ မျိုး အချို့သော ငါးအမျိုးအစားတွေက ခန္ဓွာကိုယ်အတွက် ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ငါးစားသုံးခြင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်စေပြီး လူတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရ ဓာတ် တွေကို ပေးစွမ်းစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချို့သော ငါးအမျိုးအစားတွေကတော့ ခန္ဓွာကိုယ်အတွက် ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးကိုသာ ဖြစ်စေနိုင်တာ ကြောင့် စားသုံးဖို့ မသင့်တော်တဲ့ ငါးအမျိုးအစားတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ (၁) ငါးကင်ဆိုင်တွေမှာ အများဆုံး အသုံးပြုပြီး တလားဗီးယားလို့ လူသိများကြတဲ့ ငါးဟာ ပရိုတိန်းပါဝင်မှု နည်းပါး သလို Omega3Fatty Acid လည်း မပါဝင်သလောက်ကို နည်းပါးပါတယ်။ ကင်ဆာ ဖြစ်စေတဲ့ Dioxin Level … Read more
တရုတ်နဂါးကြီးဆီကို အရှိန်နဲ့ အရောက်သွားတော့မယ့် Fabian တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်း
တရုတ်နဂါးကြီးဆီကို အရှိန်နဲ့ အရောက်သွားတော့မယ့် Fabian တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်း မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်း ဒေသအချို့တွေကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ထိ ဆွဲခေါ်နိုင်တဲ့ အနောက်တောင်မုတ်သုန် အားကောင်စေတဲ့ မုန်တိုင်း ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်အရှေ့ဘက်ပင်လယ်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေသေ းလေဖိအားနည်းရပ်ဝန် း98w သည် အားကောင်းလာပြီးယနေ့ 17.7.2021ရောက်ရှိလာသောအခါ အားကောင်းသေ ာမုန်တိုင်းငယ်09w Fabian အဖြစ်နဲ့လေတိုက်နှုန်း 35mphမြင့်တတ်လာပြီး လေထုဖိအားလည်း 1000mbသို့ ကျဆင်းလာပါတယ် တွဲခိုနေသော တိမ်အထပ်များတွေလည်းများပြားလာပါပြီး 18,19,20,21,22ရက်တွေမှာ ပိုမိုအားကောင်းလာနိုင်ပြီး အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလည်းကာ တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်း အဆင့်နဲ့တရုတ်ပြည်ထဲကို ဝင်နိုင်ပါတယ် ဒီမုန်တိုင်း အားကောင်းလာတဲ့အချိန်အနောက်တောင်မုတ်သုန်လည်းပိုမို အားကောင်းလာနိုင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသများဖြစ်သေ ာမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နှင့် တနင်္သာရီဒေသ အချို့တို့တွင် မိုးသည်းထန်လာနိုင်ပါတယ် တစ်ခါတစ်ရံ လေပြင်းတိုက်ခတ်မှု့တွေလည်းရှိလာနိုင်ပါတယ် ခန့်မှန်း 19,20,21,22နေ့များအတွင်း မိုးသည်းထန်စွာ ရက်ဆက်ရွာနိုင်သဖြစ် သဘာဝဘးများနှင့်ဆက်စပ်သော အန္တရာယ်များကြုံတွေ့ လာနိုင်ပါတယ်သို့ဖြစ်ပါသေားကြောင့် … Read more
ပိုက်ဆံချေးထားပြီး ပြန်မဆပ်ပဲ တိုင်ချင်ရာတိုင်ဆိုပြီး ပြောလာခဲ့ရင် ဒီစာဖတ်ပြီး ရဲရဲသာတောင်းလိုက်ပါ
ပိုက်ဆံချေးထားပြီး ပြန်မဆပ်ပဲ တိုင်ချင်ရာတိုင်ဆိုပြီး ပြောလာခဲ့ရင် ဒီစာဖတ်ပြီး ရဲရဲသာတောင်းလိုက်ပါ မင်္ဂလာပါ စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ပိုက်ဆံချေးထားပြီး ဆပ်မယ့်သူကပြန်မဆပ်ပဲ တိုင်ချင်တဲ့နေရာ တိုင်ဆိုပြီးပြောလာရင် ဒီစာဖတ်ပြီး ရဲရဲသာတောင်းလိုက်ပါ။ ခင်မင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် တခြားသောအကြောင်းတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ပိုက်ဆံချေးထားမိတဲ့ သူများအတွက် သိထားသင့်တာလေးတွေ ကိုယ်ချင်းစာလို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံချေးထားမိလို့ ဆပ်မယ့်သူက မဆပ်နိုင်ဘူး ကြိုက်တဲ့နေရာတိုင်လို့ပြောလာရင် ဒီစာကိုဖတ်ပြီး ရဲရဲတောင်းလို့ရပါပြီ ။ မဆပ်နိုင်ဘူး ကြိုက်တဲ့နေရာတိုင် ခင်ဗျားတို့ငွေတိုးချေးစားထားတာ ကျုပ်တို့တိုင်လိုက်ရင် ထောင်ထဲ ၅ နှစ်ရောက်သွားမယ်။ စသည်ဖြင့် ဒီလိုစကားတွေ ခဏခဏကြားနေရပါတယ်။ ဘယ်သူက စလိုက်တယ်တော့မသိပါဘူး။ ဒီစကားလေးက ငွေချေးပြီး ပြန်မဆပ်ချင်သူတွေရဲ့ လက်သုံးစကား လက်နက်ကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်လို့နေပါပြီ။ ဒီတော့ ငွေရှင်ဆိုတာလည်းလည်း အတိုးလေးရလို့ချေးမိတာ။ အခုပြန်တောင်းတော့ တချိန်က မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ ကိုယ့်ဆီက ငွေချေးခဲ့တဲ့ သူကအခုတော့ မျက်နာထားကြီးတင်းပြီး … Read more
မနက်အိပ်ရာထမှာ ကုဋေ တစ်သိန်းမျှကြီးမားသော ကုသိုလ် ယူနည်း
မနက်အိပ်ရာထမှာ ကုဋေ တစ်သိန်းမျှကြီးမားသော ကုသိုလ် ယူနည်း တစ်စက္ကန့်အတွင်း ကုဋေ တစ်သိန်းလောက်ကြီးမားတဲ့ ကုသိုလ်တွေရရှိသွား နိုင်မည့် နေနည်းများ ၁။ နိုးနိုးချင်း….မြတ်စွာဘုရားရှင် ဟောကြားဆုံးမသည့်အတိုင်းနိုးနိုးချင်း ထထချင်း အနေအထား မပြောင်းမရွေ့ပဲဝင်လေ ထွက်လေလေးကိုသတိကပ်မှတ် နေလိုက်ပါမယ်။ ဒါဆိုကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်တွေက တစ်စက္ကန့်မှာကုဋေတစ်သိန်းနှုန်းဖြင့် ရရှိသွားပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ခါတိုင်းလို သောကဖြင့် နိုးထခြင်းမဟုတ်တော့သည့်အတွက် မင်္ဂလာတရားဖြင့်စတင်သည့် နေ့လေးဖြစ်သွားပါတယ်။ ၂။ လှုပ်လှုပ်ရွရွ ဟူသမျှ….အိမ်သာသွားရာ၊ သွားတိုက်ရာ၊ မျက်နှာသစ်ရာတစ်မိနစ်ပဲဖြစ်ပါရစေ၊ သတိကပ်၍ သိနေရန်ကြိုးစားနေလိုက်ကြပါမယ်။ ၃။ သက်ရှိထင်ရှား မြတ်စွာဘုရားအား… ၃.၁. မပြုမီ ဝမ်းသာ….ရေတစ်ခွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပြည့်ပြည့်စုံစုံပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရှင်အားကပ်လှုရန် ပြင်ဆင်ရာမှာကုသိုလ်ပြုရတော့မယ်ဟု ဝမ်းသာပီတိတွေဖြစ်နေပါ့မယ်။ ၃.၂. ပြုဆဲဝမ်းသာ….ဘုရားကပ်လှုရာမှာ သက်တော်ထင်ရှားရှိသည်ဟု မှန်းဆပြီး ကုသိုလ် ပြုရပြီဟုဝမ်းမြောက် ဝမ်းသာဖြစ်နေပါ့မယ်။ ဒါဆိုကုသိုလ်က အများကြီး ဖြစ်နေပါပြီ။ ၃.၃. ပြုပြီး … Read more
ဒူးခေါင်းနှင့် တံတောင်ဆစ် မည်းတာတွေကို သဘာဝအတိုင်း ဖြူစေဖို့
ဒူးခေါင်းနှင့် တံတောင်ဆစ် မည်းတာတွေကို သဘာဝအတိုင်း ဖြူစေဖို့ စကတ်၊ ဘောင်းဘီအတိုဝတ်ချင်ပေမယ့် ဒူးခေါင်းတွေမည်းနေလို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့ ပျိုမေတွေအတွက် သဘာဝအတိုင်း ဖြူဝင်းစေမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းက 100%ထိရောက်ပြီး 10ရက်အတွင်းမှာ ရလဒ်ကောင်းတွေကို ရလာပါလိမ့်မယ်။ အဆင့် ၁ သန့်စင်ခြင်း လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ – လိမ္မော်/သံပုရာ ၁လုံး ။ နည်းလမ်း – လိမ္မော်သီးတစ်လုံးကို နှစ်ခြမ်းခြမ်းပါ။ ဒူးခေါင်း သို့ တံတောင်ဆစ်ကဲ့သို့ မည်းနေတဲ့ နေရာတွေပေါ်မှာ လိမ္မော်သီးခြမ်းနဲ့ ပွတ်ပေးပါ။ လိမ္မော်သီးမှာ ဗီတာမင် စီနှင့် citric acid တို့ပါဝင်ပြီး အရေပြားဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ အဆင့်၂ Scrub လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများ – ဆန်မှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ဇွန်း။ မုန်လာဥနီရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း … Read more
ဆေးမြင်းခွာ ဘာကြောင့်စားသင့်သလဲ အိမ်မှာဆို ပန်းအိုးထဲထည့်စိုက်ထားလို့ရတယ်၊ ဘယ်နားစိုက်စိုက် အလွယ်တကူပေါက်နိုင်တဲ့ ဆေးမြင်းခွာလေးတွေက ဘယ်လိုတွေဆေးဖက်ဝင်လဲဆိုတာ သိပြီးပြီလား။ သုပ်စားလို့ရတယ်၊ တို့စရာအဖြစ်လည်းစားကြတဲ့ မြင်းခွာသေးသေးလေးတွေပါ။ ရိုးရိုးမြင်းခွာလို ဟင်းချိုချက်တာမျိုး လုပ်မစားကြဘဲ အစိမ်းပဲစားတာများပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဆေးစွမ်းကတော့ – ဆံပင်ကျွတ်သက်သာတယ် ဆေးမြင်းခွာက ဆံပင်ကျွတ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းခံတွေဖြစ်တဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျော့ကျစေတယ်၊ free radicals တွေရန်က ကာကွယ်ပေးတယ်။ အနာကျက်မြန်စေတယ် ဆေးမြင်းခွာမှာပါတဲ့ Saponins နဲ့ တခြားအော်ဂင်းနစ်ဒြပ်ပေါင်းတွေကြောင့် အနာကျက်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုမြန်အောင် နှိုးဆွပေးပါတယ်။ ဆဲလ်တွေဆီကို သွေးပို့လွှတ်မှုကိုအားပေးပြီး ရောဂါပိုးတွေရန်ကကာကွယ်ပေးတာကြောင့် အနာကျက်မြန်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ အသားလှစေတယ် ဆေးမြင်းခွာမှာ အသားအရေကိုကျန်းမာလှပစေနိုုင်တဲ့ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ saponins တွေ ကြွယ်ဝပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အမာရွတ်တစ်ရှူးတွေကိုဟန့်တားပေးလို့ ခွဲစိတ်မှုအမာရွတ်တွေကိုတောင် ပျောက်ကင်းသက်သာစေတဲ့အထိ အသားအရေကိုအကျိုးပြုပါတယ်။ အရေးအကြောင်းတွေနဲ့ရင့်ရော်မှုလက္ခဏာတွေကိုလည်း လျော့ပါးစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေတယ် ဆေးမြင်းခွာက သွေးလည်ပတ်မှုစနစ်မှာ အရေးပါတဲ့နေရာနှစ်ခုကနေ … Read more
မန္တလေးတိုင်းမှာ ဒုတိယအကြီးဆုံးဖြစ်သော ဘက ဆင်ဖြူချပ်မိဘမဲ့ကျောင်းကို ပိတ်သိမ်း
ငါတို့ခေတ်ပဲဆိုပြီး လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်နေတဲ့ ဆီဆိုင်တချို့အကြောင်းကိုပြောပြလာတဲ့ အိစိကွေး
ဖြူစင်ကြတဲ့ အနုပညာသမားဆိုတာ အနုပညာအလုပ်ပဲလုပ်သင့်ကြောင်းကို ပြောဆိုလိုက်တဲ့ အမေများအဖွဲ့ဝင် ဒေါ် နွဲ့နွဲ့စန်း.
အနုပညာအလုပ်‌တွေ ပုံမှန်လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ ရုပ်ရှင်ရုံတွေပြန်ဖွင့်ပြီး းရုံတင်ပြသမဲ့ ကားများကို စကစ ဝန်ကြီးပြော
သူမရဲ့ရင်သွေးလေးများဂေဟာမှ HIV ပိုးကူးစက်ခံရတဲ့ သားငယ်လေးရဲ့စျာပနမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီး ဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
ပရိသတ်တွေကို ဆဲရေးတိုင်းထွာနေတာကြောင့် ဝေဖန်မှုမြှင့်တက်နေတဲ့ နေဒွေး
ယောကျာ်းယူဖို့ စုထားတဲ့ပိုက်ဆံတွေ 3D ပုံအောမိလို့ ခွေးလုံးလုံးဖြစ်ရပီဆိုတဲ့ တိုးအောင်
ပရိတ်သတ်တွေကို ရုပ်ရှင်ရုံတွေဖွင့်ရင် အားပေးမှာလားလို့ မေးခွန်းထုတ်လာတဲ့ ရန်အောင်
ညအိပ်ရင် ဘယ်ဘက်စောင်းပြီး အိပ်ဖြစ်အောင်အိပ်ပါ
တောင်ဥက္ကာလာမှာ ကားပေါ်ကနေ ပ.စ်.ချပြီးစွန့်ပစ်ခံလိုက်ရတဲ့ ကလေးငယ်ရဲ့အ‌‌ကြောင်းကို ပြောပြလာတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ